Rosario de Yauca: Ny Virjiny Iqueña ao Però | Vaovao momba ny dia
Rosario de Yauca: Ilay Virjiny Iqueña
Betsaka ny olona mahatsapa fatratra fatratra an'i Rosario de Yauca: La Virgen Iqueña. Virjiny izy fa ho an'ny mpino maro dia mahatsapa ho akaiky azy ireo amin'ny fotoana ratsy indrindra sy tsara indrindra vitany izy ireo Rosario de Yauca, tsy mandao azy ireo mihitsy ary mampita hery amin'izy ireo isaky ny mila izany. Virjiny malaza any Peroa izy, ao amin'ny tanànan'i Ica marina.
1 Fankalazana ny olo-masina mpiaro an'i Ica
2 Tsy mora ny miditra amin'ny fitoerana masina
3 Traikefa tsy manam-paharoa ho an'ireo mpivavaka aminao
4 Rosario de Yauca: Ilay Virjiny Iqueña
Fankalazana ny olo-masina mpiaro an'i Ica
Ny faran'ny herinandro voalohany amin'ny volana oktobra dia datin'ny tsy fivadihana sy fampivondronana ho an'ny mponin'i Ica any Peroa, satria masina ny zava-dehibe toy ny Virjin'ny Rosianina ao Yauca, izay misy ny fitoerany masina dia eo afovoan-tanàna ary aiza no mahazatra ny mandeha fivahinianana masina. Ny fivahinianana masina ity dia maharitra hatramin'ny 6 ora eo ho eo, fa ny mpivavaka kosa manao azy amin'ny hafaliana sy fahasambarana lehibe.
Ny sabotsy voalohan'ny volana oktobra dia nalemy i Ica hanomezam-boninahitra ny mpiaro azy. Amin'ity andro manan-danja ity dia feno olona ny arabe, misy bisy miaraka amin'ireo olona tonga ao an-tanàna hanomezam-boninahitra ilay mpiaro ary tsy misy fanavahana dia mankany amin'ny toerana masina Yauca avokoa.
Tsy mora ny miditra amin'ny fitoerana masina
Ny fitoerana masina dia miorina ao an-kibon'ny tany efitra feno fasika, fasika ary tsy ara-dalàna. Sarotra ny hiampitana, na ny fiara efa voaomana tsara aza dia sahirana amin'ny fidirana aminy. Na izany aza, ny fanamby sy fanoloran-tena ho an'ny mino dia ny hiampita ny tanàna, ny manodidina azy ary ilay efitra voalaza etsy ambony an-tongotra.
Ny tsipika midadasika amin'ny lafiny iray dia mamorona ny vatan'ireo mpanolo-tena izay mandeha an-tongotra matetika., mankany amin'ny presinto masina. Tsy misy isalasalana fa ny fanoloran-tena sy ny faniriana ho tonga, ny fahatsapana izay mampiray ny olona ho virijina dia tsy isalasalana fa zavatra manaitaitra. Ho azy ireo dia mameno ny fony izy ireo ary mahatsapa ho afa-po na eo aza ny fahasahiranana.
Feno olona te-hanaja ny mpiaro ireo bus. Ireo bisy ireo dia toa karana ka mandeha amin'ny lalana hafa mankany amin'ny fivahinianana masina, izay manafoana ny tanàna, mamela azy io ho lao, mamindra ny fiainany mankany amin'ny tany karankaina miandry ny Virjiny.
Traikefa tsy manam-paharoa ho an'ireo mpivavaka aminao
Ny traikefa manintona dia ny miaina raha ny tanàna iray manontolo dia mandeha lavitra amin'ny hetsika ara-pivavahana iray, izay miala amin'ny fanaony amin'ny fihainoana antso masina, fomba amam-panao izay tsy navelan'ny tanàna lehibe hanohy ny fiainany isan'andro misavoritaka. Ica dia manintona kokoa noho ny hatramin'izay tamin'io daty io, rehefa manary ny arabeny izy hankany amin'ny tsangambato ara-pivavahana lavitra ny fetrany, Manalavitra ny simenitra sy ny tabataba izay manelingelina ny fanahy, akaikin'ny natiora, izay misy fiainana mihoatra ny noeritreretinao. Miara-miasa ho an'ny tanjona tokana ny olona, ​​hanaja ny Virjiny Iqueña, izay miaraka amin'izy ireo mandritra ny taona ao am-pony.
Ny lalan'ny fivahinianana masina mankany amin'ny fitoerana masina dia sorona fa raha te hankafy ny fahafenoan'ny departemanta Ica ianao dia izany no fotoana tsara indrindra, satria ny làlanao dia takatra ihany koa amin'ny fizahan-tany fizahan-tany, rehefa mamakivaky ny afovoan-tanàna; ny sisiny akaiky izay ny hacienda; ny distrika ambanivohitra Los Aquijes; ny efitra izay ambanin'ny lanitra feno kintana feno; ary ny distrikan'i Yauca del Rosario, izay ny anarany dia noho ny virijina amin'ny fety sy ny toerana misy ny tempoliny. Ny ankamaroan'ny faritanin'i Ica dia fantatra amin'ity dian'ny finoana ity, izay ankoatry ny fanelingelenana ny fomba fijery dia afaka mianatra momba ny fahatsapana ara-pivavahan'ny vondrom-piarahamonina iray izay tsy hafahafa amin'ny fomba amam-panao taloha. Amin'ny volana oktobra, ny endrika tsara indrindra amin'ny Ica dia ny maha-mpivavaka azy.
Tany am-piandohan'ny taonjato faha-XNUMX no, teo afovoan'ny tany efitra Yauca, dia hita teo afovoan'ny ala ny Virjiny olona telo izay nonina tao an-tanàna, ary afaka nisaintsaina voalohany ilay antsoin'izy ireo koa izy ireo ankehitriny: "Our Lady of the Rosary" ary nasainy namihina ny zazakely Jesosy ary rosary nanisy marika ny tanany. Sahabo ho 60cms ny haavony ary nilaozan'ny olona very tany an'efitra Ica.
Raha ny fijoroana vavolombelona dia nitranga tamin'ny sabotsy voalohany tamin'ny volana oktobra lasa teo, ny 3 oktobra 1701 lasa teo. Ary izany no antony nahatonga izany tamin'ny daty nankalazana ny sabotsy voalohany tamin'ny volana oktobra isan-taona ary ny mpivavaka aminy dia mamakivaky ny tany efitra hanomezam-boninahitra an'io andro mahafinaritra io, izay ahitana ny Virjiny ary ho an'ny maro, voavonjy avy amin'ny efitra foana.
Ny olona nahita ny Virjiny dia tsy hadino, ary ankehitriny dia mbola olona tsara tadidy ho an'ny mponina rehetra izy ireo. Ny anaran'ireo olona ireo dia: Nicolás Ortega, Diego Gutiérrez ary Francisco Córdova. Noho ireo telolahy ireo dia voavonjy ny Virjiny Iqueña ary anio dia azon'ireo mpivavaka aminy ivavahana izy.
Rehefa hitan'izy ireo izy dia nieritreritra ny hamindra azy tany Ica fa rehefa nanandrana nitaterana azy izy ireo dia tsy afaka nanao izany, saingy toa tsy kisendrasendra izany.. Ireo olona nanandrana nanandratra azy ary tsy nahomby, dia nandika izany fa ny Virjiny dia tsy te-hoentina ary te hijanona miaraka amin'izy ireo hiaro azy ireo hatramin'ny fotoana nahitana azy ho fanehoam-pitiavana lehibe amin'izy ireo. Ny fanirian'ny renin'Andriamanitra dia ny hijanona ao amin'io efitra io ary izany no nananganany trano fiangonana ho fisaorana an'i Calitxo Muñoz. Taorian'ny vavaka dia nentina tany amin'ny trano vaovao ny Virjiny, ho any amin'ny fitoerany masina ankehitriny. Niely nanerana ny tanàna ny vaovao ary hatrizay dia ny Virjin'i Yacua dia hajain'ny mponina rehetra izay nanao azy ho mpiaro azy mandrakizay.
Raha mandeha any amin'ity tanàna any Peru ity ianao, dia aza misalasala manao izany fa manatrika ny asabotsy voalohany amin'ny volana oktobra satria amin'izany dia afaka mankafy fifikirana be amin'ny Virjiny ianao. Ho tsapanao ny fitiavan'ny mpiray tanindrazana amin'izy ireo ary ny fomba hanambaran'ny tanàna iray manontolo ny fihetsem-pony hanomezam-boninahitra azy, ka hamela ny tanàna tsy hanana mponina satria eo an-dàlana mankany amin'ny toerana masina ny rehetra hanome voninahitra azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Peru » Rosario de Yauca: Ilay Virjiny Iqueña
Misaotra ry maman'i yauca tamin'ny fanomezanao rehetra ary misaotra anao nitahy ny zanakao iray hafa
Tena virijina mahatalanjona tokoa izy, tena mino azy aho, nampanantena handeha hamonjy fivahinianana mandritra ny herintaona ary efa 5 taona no hotanterahiko, satria manohy mihaino ahy izy ary manome maro mankasitraka.
Misaotra reny masina
Mamaly an'i Milagros